Pâques - FKMSM
Accueil > Articles > Pâques
“Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao?” “Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné?” Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Mbola faly isika fa mbola vangian’ny tenin’Andriamanitra mandrakariva! Indro ary atolotra anao fizarana fohy isan’andro miompana amin’ireo teny fito izay nolazain’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana. Enga anie ka hampahery sy hitarika […]
Jésus dit: “Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font.” Luc 23,34 Hoy Jesosy: “Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony.” Lioka 23:34 Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Mbola faly isika fa mbola vangian’ny tenin’Andriamanitra mandrakariva! Indro ary atolotra anao fizarana fohy isan’andro miompana amin’ireo teny fito izay nolazain’i Jesosy […]